Odayayaasha Dhaqanka Shirka Jowhar Oo Isku Mari la, Qeybsiga Xildhibaanada
Shirka Jowhar (Sawirka Radio Muqdisho)
Shirka magaalada Jowhar uga socdo odayaasha dhaqanka iyo duubabka qaar ka mid ah beelaha dega Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan ayaa waxaa la isku mari la’yahay qeybsiga xildhibaanada uu yeelan doono maamul goboleedka la rabo in loo dhiso Shabeelaha Dhexe iyo Hiiraan.
Wazaaradda arrimaha gudaha Soomaaliya oo agaasimeysa shirka ayaa u sheegtay odayaasha dhaqanka beelaha dega labada gobol in ay qeybsadaan 71 xildhibaan, taasoo ay duubabka dhaqanka u arkaan qoondo yar.
Hadaba si aan wax badan uga ogaano arrintaan ayaa wariyaheena Nur Hasan Bukhaari uu ka wareystay Wabar Maxamed Wali Wabar Xuseen oo ka mid ah duubabka dhaqanka ee ka qeybgalaya Shirka Maamul u sameynta Hiiraan&Shabeelaha Dhxe.
Ugu horeyn wuxa uu weydiiyey habka ay u rabaan qabii’lka labada gobol in ay u qeybsadaan xildhibaanada.?
Wareysiga Wabar Maxamed Wali